मन्त्रि आलेको टार्गेट बनेका 'बतास' को हुन् ? (नालीबेली)
मन्त्रि आलेको टार्गेट बनेका ‘बतास’ को हुन् ? (नालीबेली)
काठमाडौं। ५० हजार रुपैयाँमा पोखराको पृथ्वीचोकमा टेलिफोन सेवा सुरु गरेर व्यवसायमा हात हालेका आनन्दराज बतास यतिबेला नेपालका ठूला व्यवसायीमध्येका हुन् । अरबौंको लगानी र ११ सय कर्मचारीको रोजगारदाता रहेको बतास समूहका अध्यक्ष हुन् उनी ।
पशुपति धर्मशाला होस् या बतासले सञ्चालन गरेका कतिपय उद्दोग व्यवसाय नै किन नहोस् निगरानीको अधिकार जिम्मेवार निकायलाई छ । तर, समयमै निगरानी नगर्ने कार्यशैलीले पनि विवादास्पद कार्यहरु हुनेगर्दछ । नियमन फितलो हुँदा व्यवसायीले पनि सीमा नाघ्ने, नेता देखि कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ ।